Ihe ịga nke ọma Ecommerce na mba dị iche iche | ECommerce ozi ọma
Ihe ịga nke ọma Ecommerce na mba dị iche iche
Susana Maria Urbano Mateos | | Azụmahịa
Lọ ọrụ e-commerce ọ na-eto n'uwa niile. Kwa ụbọchị, ahịa e-commerce ọhụrụ na-apụta ma ahịa ndị e mepere emepe na-eru ihe mgbaru ọsọ ọhụrụ.
Ka anyị lee anya na e-commerce ahịa kasị ukwuu n'ụwa site na mba na usoro azụmaahịa nke nke ọ bụla na-apụta.
Taa, China bụ ahịa e-commerce kasị ukwuu n'ụwa. ụwa jikọtara ndị mmekọ e-commerce site na otu Alibaba, Taobao, Tmall, tinyere ndị ọzọ. Site na uto 35% kwa afọ, China bụkwa otu n'ime ahịa e-commerce na-eto ngwa ngwa n'ụwa.
Mgbe ịchịchara azụmahịa ụwa Ruo ihe karịrị afọ iri, United States bụ mba nke abụọ kachasị ukwuu na ụwa na ntanetị. N'ịbụ ndị ndị ahịa e-commerce dị ka eBay na Amazon na-edu, mba ahụ na-ahụ ọganihu e-commerce dị mma n'akụkụ niile ma nwee ọtụtụ akụkụ ụlọ nke ihe ọhụrụ maka usoro e-commerce ọhụrụ.
N’agbanyeghi obere ogo ya, UK buru ndi ahia n’inwe e-commerce. Amazon UK, Argos na Play.com Ha bụ ụfọdụ n'ime saịtị azụmahịa e-commerce kasị ukwuu na UK na mba ahụ nwekwara otu n'ime pasent kachasị elu nke ahịa e-commerce nke ire ere ahịa zuru ezu.
Germany bụ nke abụọ kachasị ukwuu ahia e-commerce nke Europe mgbe United Kingdom gasịrị. Dị ka UK, Amazon nwere ezigbo òkè nke ahịa German. EBay na Germany nke na-ere ahịa ntanetị dị na Otto bụ ụfọdụ n'ime ndị egwuregwu e-commerce kachasị elu na mba ahụ.
Na-eduzi site na ndị egwuregwu mpaghara dịka - Odiego & C-ego, ahia e-commerce nke France nwere nke isii na ụwa. Dị ka nnukwu ahịa e-commerce ndị ọzọ dị na Europe, Amazon nwere ezigbo ndabata na France, mana ụdị ndị obodo ahụ jisiri ike na-asọmpi ya na ndị ibe ha US.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Azụmahịa » Ihe ịga nke ọma Ecommerce na mba dị iche iche
Ihe ndị ọkachamara na-eche maka ọdịnihu nke e-commerce
Akụkọ banyere Ecommerce na trajectory ya